ITHUBA LOKUBA AMARAPPER ABELANE NGEENGOMA EZI-4 EZINTSHA: MAMELA - IINDABA
Ewe ayisiyiyo icwecwe, kodwa ngethuba iRappa ikhuphe ingqokelela yeengoma ezine ezintsha. Mamela ku-Work Out, Wala Cam, Ndingafuna uKhuseleko, kunye ne-65th kunye ne-Ingleside ngezantsi. Umchwephe waseChicago uSupa Bwe uvela kwiWala Cam, kwaye kuKhuseleko, ngethuba ubiza uSodolophu waseChicago u-Rahm Emanuel. Kwaye u-Rahm wenze / ndilindele ukurhoxa / kwaye uvule uphando kuzo zonke eziholide zihlawulelwayo zababulali. Ngomhla wama-65, ubhekisa kweyakhe Umncedisi uDonald Glover : Zonke iirap zam zazimalunga nokumiswa / Ngenye imini uDonald wandithatha kuhambo / Mncinci, waqhekeza uChano akasophuli.
Esona sityhilelo sikhulu, nangona kunjalo, lo mzuzu u-Ndingafuna uKhuseleko: Ndithengile UChicagoist Ukukuqhubela nje ishishini lobuhlanga. Gothamist ziqinisekisile iindaba -IChance's Social Media LLC inene ithenge iwebhusayithi yeChicago kwiWNYC (eyafumana iChicagoist ekuqaleni kwalo nyaka). Ndonwabile kakhulu ngokuqhubeka nomsebenzi weChicagoist, iqonga lendawo elihlangeneyo leendaba zeChicago, iminyhadala kunye nokuzonwabisa, utshilo uChance kwingxelo. Ndijonge ukuyiqala kwakhona kwaye ndizise abantu baseChicago indawo ezimeleyo yemithombo yeendaba egxile ekwandiseni amazwi ahlukeneyo kunye nomxholo.
Kwangoko kule veki, kwaxelwa ukuba Ithuba liceba ukulahla icwecwe elitsha ngokuphela kweveki, kodwa uCance wabuyela kwibango lakhe, ebhala, Uxolo akukho albhamu kule veki, def in the stu tho. Okwangoku uxelwa ukuba usebenza kwi ubude obugcwele kunye neKhan West .
Ukuqokelelwa kweengoma ziiChance's tracks new tracks ezintsha ukusukela ngomhla wakhe weKrisimesi 2017 mixtape noJeremih ( Umtshato weKrisimesi olungileyo kaMama: Uphinde wasongelwa ). Ngaphambi koko, wenza ingoma entsha ebizwa ngokuba yiNgxaki yokuQala yeHlabathi ngexesha lokuvela kwiLate Show noStephen Colbert.
Ukukhululwa kweyona nto yakutshanje kukodwa yi-2016's Incwadi yemibala . Kunyaka ophelileyo, uChance wafumana amanqaku akhe Inombolo yokuqala engatshatanga nge Ndinguye , KaDJ Khaled Ndiyabulela Umkhondo obonisa uJustin Bieber, uMigos ’Quavo, kunye noLil Wayne.
Funda Charting Chance Rapper's engatyikitywanga Impumelelo Pitch.
Eli nqaku lapapashwa okokuqala ngoJulayi 18 nge-10: 50 ebusuku. EMpuma. Igqityelwe ukuhlaziywa ngoJulayi 19 ngo-1: 08 ekuseni eMpuma.
billie eilish xa silele
ngaphandle kwehlathi iigrama
umzobo wesenzo sendalo
Isangqa seggy pop skull
iingoma zeTinashe zakho
abaxhobileyo bathanda kuphela
I-coachella ngempelaveki 1 2017